किन विश्वमा नै फरक छ नेपाल ? जान्नुहोस नेपाल सम्बन्धी केहि रोचक जानकारी । – JanaSanchar.com
संबाददाता : सागर गिरी	प्रकाशित मिति: (२०७४ फाल्गुन ३०, बुधबार) १२:५२
नेपाल ! हिमालको काखमा रहेको विश्वको सबै भन्दा सुन्दर देश , बिहान सुर्यको उदयसंगै सेता दन्तलहर देखाएर हासिरहेको हुन्छ । पहाडबाट तल तिर निरन्तर बगिरहने खोलाले भरिरहने संगीत र हावाको तालसगै तराईका फाटहरु झुलीरहेका हुन्छन ।
फरक जाति, भाषा , धर्म , सस्कृतिका मानिसहरुको बसोबास रहेको देश हो नेपाल । हिमाल देखि तराई सम्म आ-आफ्नै बिशेष पहिचान बोकेका र आ-आफ्नै फरक सस्कृति अनुसार फरक फरक चाडपर्व मनाउने मानिसहरुको बाहुल्य रहेको छ ।
यहाँको विविधता र यो विविधतामा रमाउनको लागि वर्षेनी बिभिन्न तेस्रो मुलबाट नेपालमा आउने चराचुरुङ्गीहरु र यहाँ रहेका ठाउँ र हावा पानी अनुसार पाइने बन्यजन्तुहरु यहाँका आकर्सकका केन्द्र बिन्दु हुन ।
प्राकृतिक सुन्दरता , फरक जाति , भाषा र धार्मिक आस्था भएकाहरु विचको एकता, यहाँको हावा-पानी , र ठाउँ अनुसार पाईने वन्यजन्तुहरु नेपालका बिशेषता हुन । यिनै कुराहरुमा रहेर नेपालको बारमा केहि रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिने छ ।
प्रस्तुत छन नेपालको बारेमा केहि यस्ता जानकारी जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ ।
(२०७४ फाल्गुन ३०, बुधबार) १२:५२ मा प्रकाशित
बिल गेट्सको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक, एक हजार डलर माग : दोब्बर रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव